I-Megane ishintshe ukwenza | Isolezwe
I-Megane ishintshe ukwenza
Isolezwe / 26 July 2012, 10:26am / FANELESIBONGE BENGU
AbakwaMegane bathi ubuchwepheshe besimanje okubalwa kubo i-navigator eno-google, i-aircon ezishintsha yona umoya nobunye benza impilo ibe lula.
ABANTU abasha bazohleka bodwa ngokuzwa izindaba zokuthi isithelekile iRenault Megane entsha ehlukene kathathu njengoba kukhona i-hatch, coupe neyi-sport. AbakwaMegane bathi ubuchwepheshe besimanje okubalwa kubo i-navigator eno-google, i-aircon ezishintsha yona umoya nobunye benza impilo ibe lula
ABANTU abasha bazohleka bodwa ngokuzwa izindaba zokuthi isithelekile iRenault Megane entsha ehlukene kathathu njengoba kukhona i-hatch, coupe neyi-sport.
UMHLAZIYI: FANELESIBONGE BENGU
IMOTO: RENAULT MEGANE
UKUSHUBISA umbango wabathengi bezimoto ezincane ezingama hatchback, abakwaRenault bethule iMegane entsha abethemba ukuthi izoheha abathengi.
Yize uma uyibuka ungaze uzitshele ukuthi ngendala kodwa ithe ukuhluka kancane indlela ebukeka ngayo, ubuchwepheshe besimanje obutholakala kuyo kanye namanani ayo.
Lezi zimoto zihlukene kathathu njengoba kukhona eyi-hatch, i-coupe neyi-sport.
AbakwaMegane bazishaya isifuba ngokuthi izimoto zabo zishibhile uma uziqhathanisa nezinye, ikakhulukazi i-coupe okungadingi ukuthi ufake imali ethe xaxa uma uyidinga. Yize unganenezeli ngamali kodwa bona banenezele ngezinto enazo.
UHLOBO LWE Hatch
Kule eyi-hatch zikuhlakisiwe zaba zine njengoba kukhona i-1.6 Expression okuyiyona eshibhe kunazo zonke kodwa egabe ngezinto eziningi njengobuchwepheshe besimanje obuhlanganisa i-cruze control, amawindi kagesi angemuva nangaphambili, ama-airbag ayisithupha, amarimu angu-16 inch, i-radio ene Bluetooth nendawo yokufaka i-iPod nama fog lights.
Ngokufaka uR10 000 ngaphezulu ungazitholela I-1.6 Dynamique yona eshaya ngeTomTom Live navigation, amalambu eLED akhanya emini no17 inch wamarimu.
Kulo mndeni weDynamique sekuzalwe neka-diesel, i-1.6 dCi ekhipha eyakudala i-1.9 dCi.
Eyokugcina yi-1.4 Turbo GT Line yona eshaya ngo-17 inch wamarimu, izihlalo zesikhumba, dual-zone climate control, ne-3D Arkamys audio system, rear parking sensors, dual-zone climate control ehlola iqophelo lomoya nama-wiper azishaya wona.
Le yiyo engithole ithuba lokuyishayela kanti engikuzwile ngayo wukuthi kulula ukushintsha amagiya kanti uma unyathela amafutha iyasukuma futhi yenze nomsindo ozwakala kamnandi ezindlebeni uma ucime i-radio. Ngaphandle kokuba mnandi ekuyishayeleni, kayinawo amabhathini amaningi angaze akudide ukuthi ngawani.
Akungabazeki ukuthi lama Coupe akwaMegane angamanye okuyiwona ashibhe kunawo wonke uma uwaqhathanisa neyakwaVW iScirroco, Opel Astra GTC namanye.
I-1.6 Expression coupe ifana ne-hatch imali yayo kodwa yona ihluke ngokuthi i-sporty futhi ishaya ngo-bumper onombala omnyama. Nayo ishaya nge cruze control ene-speed limiter, angu-16 inch nama-fog lights ne-aircon
I-1.4 Turbo GT Line nayo Ibiza imali efanayo neDT Line enezicabha ezinhlanu kanti ishaya ngeTomTom Live navigation no-bumper osuwenziwe kabusha, i-sunroof (umauyifuna), isteringi sesikhumba ne-rear parking sensor.
Ukuqala nje nge-1.6 Expresion yona ikhahlela amandla angu-81KW ne-torque engu-151. Le moto bathi kuyithatha imizuzwana engu-10.5 ukufika ejubaneni elingu-100km/h.
I-1.6 Dynamique nayo iyafana ne-Expression njengoba inamandla angu-81KW ne-torque engu-151. Njengayo i-Expresson, kuyithatha imizuzwana engu-10.1 ukufika ejubaneni elingu-100km/h.
Entsha i-1.6 dCi Dynamique yona bathi idle ngo-96KW wamandla ne-torque engu-320. Le moto eshaya ngamagiya ayisithupha bathi kuyithatha imizuzwana engu-9.8 ukufika ejubaneni lika-100km/h.
Okuyiyona enamandla okuzidlula zonke kuma-hatch yi-1.4 Turbo GT Line yona ekhipha amandla angu-96KW ne-torue ngu-190. Yona bathi kuyithatha imizuzwana engu-9.7 nje vo ukufinyelela ejubaneni elingu-100km/h.
AmaCoupe njengoba ehlukene kabili nje eyokuqala i-1.6 Expression yona inamandla angu-81KW ne-torque engu-151. Ukufika ejubaneni lika-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-10.5 kanti ujubane layo elikhulu ngu-195km/h.
I-1.4 Turbo GT Line yona ishaya ngo-96KW ne-torque engu-190. Bathi kuyithatha imizuzwana engu-9.6 ukufika ejubaneni lika-100km/h kanti ijubane layo elikhulu ngu-200km/h.
Yonke inhlobo ye-Megane iphuma ne-warranty yeminyaka emihlanu ngemuva kokuhamba ibanga lika-150 000km. Iphinde ibe ne-service plan yeminyaka emihlanu ngemuva kokuhamba ibanga lika-100 000km.